Youth Committee – CTUM
CTUM Youth Committee
မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အလုပ်သမားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ် (CTUM) ၏ ဒုတိယအကြိမ် ညီလာခံသက်တမ်းအတွက် လူငယ်ကော်မတီ ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းခြင်း ၂၀၁၉ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ (၂၈)ရက်နေ့ ရန်ကုန်မြို့၊ တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်ရှိ Grand Mercury Hotel တွင်မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အလုပ်သမားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ် (CTUM) ၏ ဒုတိယအကြိမ် ညီလာခံသက်တမ်းအတွက် လူငယ်ကော်မတီ ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းခြင်းကို ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ လူငယ်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်များ […]
AFFM’s Youth committee election and planning meeting.
AFFM’s Youth committee election and planning meeting. (၂၀၁၉ မေ ၁၆-၁၇) လူငယ်ကော်မတီအမှုဆောင်များကိုဒီမိုကရေစီနည်းကျ အဆိုပြုခြင်းလက်ထောင်မဲစနစ်ဖြင့်အောက်ပါအတိုင်ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခဲ့ကြပါသည် ၁.ဦးစိုင်းမြတ်ကျော်ထွေး – ဥက္ကဌဲ၂.ဒေါ်ချောစုလိူင် – ဒု-ဥက္ကဌ ၃.ဦးစိမ်းသူအောင် – အတွင်းရေးမှူး ၄.ဦးရဲထွဋ်အောင် ကော်မတီဝင် ၅.ဦးထန်လော့မန်လျန်း ကော်မတီဝင် […]